‘भिडेर होइन, मिलेर गएमात्रै सफल भइन्छ’ युवा तथा खेलकुद मन्त्री दलजित बिके श्रीपाईली « जागरण मिडिया सेन्टर
Home » अन्तरवार्ता » ‘भिडेर होइन, मिलेर गएमात्रै सफल भइन्छ’ युवा तथा खेलकुद मन्त्री दलजित बिके श्रीपाईली
२०७३ साउन २४,जागरण मिडिया सेन्टर ।
धेरै सम्भावित प्रतिस्पर्धीलाई पछि पार्दै दलजित बिके श्रीपाईली युवा तथा खेलकुद मन्त्री नियुक्त भएका छन् । उनले बिहीबार प्रधानमन्त्रीसँगै शीतल निवासमा राष्ट्रपतिबाट शपथ लिए । रुकुम निवासी श्रीपाईली माओवादी केन्द्रका समानुपातिक सांसद हुन् । खेलकुद मन्त्री श्रीपाईलीको विगत भने राजनीतिसँगै खेलकुदसँग पनि जोडिएको छ । उनी भलिबल खेलाडी हुन् । उनी एथलेटिक्स र मार्सल आट्स् पनि खेल्छन् । श्रीपाईलीको परिवार पनि जनयुद्धमै थियो । उनका भतिज भोजपुर लडाईंमा सहिद भएका थिए भने बुहारी सन्धीखर्कमा भएको भीडन्तमा सहिद भइन् । मामालाई सेनाले हत्या ग¥यो, बहिनीलाई बलात्कार गरेर हत्या गरियो र जिउँदै खाल्डोमा पुरियो । युद्ध, राजनीति र खेलकुदका संगम श्रीपाईलीसँग दलितअनलाइनले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश–
युवा तथा खेलकुद मन्त्रीको कार्यभार सम्हाल्नुभएको छ, तपाईंका योजनाहरु के–के छन् ?
पहिलो कुरा त म नेपाल सरकारको युवा तथा खेलकुद मन्त्री रुपमा अहिले आएको छु । यो समुदायको दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने उत्पीडित समुदाय क्षेत्रबाट पनि आउनु भनेको स्वभाविक रुपमा राम्रो कुरा हो । एउटा उत्पीडित समुदायको प्रतिनिधित्व गरेर आएको इतिहासको लामो कालखण्डपछि यो ठाउँमा पुग्ने मध्यको एक अवसर हो । यो अवसर दिएकोमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी केन्द्र मेरो पृष्ठभूमि आभार तथा धन्यवाद प्रकट गर्न चाहन्छु ।
विशेषगरी कमरेड प्रचण्ड नेतृत्वको पार्टीले मलाई यो ठाउँमा पु¥याएको छ । यसको मतलब ०५२ साल फागुन १ गते म जनयुद्धमा प्रवेश गरेर जनमुक्ति सेनाको हैसियतले, सुरक्षा दलको कमाण्डर भएर यसमा लागे , एउटा कुरा म यता लाग्नुको पछाडिको कारण पुरानो राज्य सत्तालाई ध्वंस पार्दै नयाँ राज्यसत्ताको स्थापना गर्नलाई हो ।। जतिबेला मैले घोषणा गरेँ, त्यति बेला उत्पीडित समुदाय वर्ग, लिंग मुक्तिको निम्ति लडेको पार्टी भनेपछि यो पार्टीलाई रोज्यौं हामीले । यो पार्टीले हाम्रो मुक्ति गर्छ भनेर वर्गीय र जातीय मुक्ति यसैमा छ भन्ने एउटा त्यतिबेलाको सोच भएर हामी यो पार्टीलाई लिएर युद्धको सिलसिलामा यहाँ आयौं । र दोस्रो कुरा हामी स्वयं उत्पीडनमा परेको हुनाले विशेष गरेर राज्य सत्ताको विभिन्न निकाय व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका हाम्रो प्रतिनिधित्व नगरिएको, राज्य बाट पछाडि नै पारिएको, खास गरेर सामाजिक राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक र साँस्कृतिक अधिकारबाट बञ्चित भएको एउटा समुदाय यो ठाउँमा आउनु पनि एउटा गर्वको रुपमा नै ठान्नु पर्छ । अहिले जहाँसम्म म यो ठाउँमा आउनुको मूल्यांकन पार्टीले ठीक गरेको छ । किनभने म एउटा उत्पीडित क्षेत्रबाट जन्मेको विशेष गरेर रुकुम जस्तो विकट ठाउँमा, त्यसमा पनि दलित समुदायबाट जन्मेर राज्यको महत्वपूर्ण ठाउँमा आउन सक्नु रुकुम मात्र होइन, सिंगो नेपालको उत्पीडित वर्ग क्षेत्र समुदायको एउटा प्रतिनिधित्व गरेको रुपमा हाम्रो दलित समुदायले गर्व गर्नुपर्छ ।
तपाईंको पृष्ठभूमि लडाकु र खेलसँग सम्बन्धित छ, अब मन्त्रालयको जिम्मेवारी कसरी निर्वाह गर्नुहुन्छ ?
मैले जुन मन्त्रालय सम्हालेको छु, यो राष्ट्रिय गौरवसँग पनि जोडिएको छ । खेलाडी भनेको अनुशासित टिम पनि हो । खेलाडी राष्ट्रको गहना पनि हो । र स्वास्थ्यको लागि पनि राम्रो पनि छ । त्यसकारण आम जनतालाई समेटेर युवाहरुलाई समेट्ने देश निर्माणको पाटो समाल्ने केन्द्रिकृत गर्ने हो । राष्ट्रको गौरव बढाउने गहनाको रुपमा खेलाडीलाई लिइन्छ । युवाहरु उदाउँदा सूर्य हुन् । तर, हामी पनि अस्ताउँदो सूर्य हौं ।
अर्को कुरा, म सादा जिवनको एउटा ठुलो नेतृत्व गरेर आएको हुँ । मैले एउटा कमाण्डरको भूमिका त्यहा पनि निभाएको छु । म यहाँ आउने बेला खेलकुद क्षेत्रमा केही विकृति तथा विसंगती हरु पनि छन् । थुप्रै समस्याहरु पनि छन् । यी सबैलाई निराकरण गर्नको लागि सबैलाई ठिक ठाउँमा ल्याउनका लागि कानुन ऐन नियम आवश्यक पर्छ । नीति र विधि बनाउने अभियानमा म क्रियाशील हुनेछु । नीति र विधि अथवा ऐन नै तयार गरेर ग¥यौँ भने कसैले केही गर्न सक्दैन । मेरो सोंच अब त्यतातिर जाँदैछ । जहाँसम्म माओवादीकै अहिले खेलकुद मन्त्री भनेको यूवा छ । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय बल्ल युवाले पाएछ भन्ने छ । युवा आएपछि बल्ल आफ्नो अस्तित्व, सोच र विचार हुन्छ । म राजीतिक रुपमा पनि सैन्य जीवनमा पनि, खेलकुद क्षेत्रमा पनि सफलता हासिल गर्दै आएको छु । मेरो अनुभवको आधारमा म सफल हुने गरी काम गर्छु । दलजित आयो केही गर्छ भनेर साथीहरुको उत्साह छ । साथीहरुको उत्साह भनेको मेरो लागि अवसर पनि हो, चुनौती पनि हो ।
थुप्रै समस्याहरु छन् । यी सबैलाई निराकरण गर्नको लागि सबैलाई ठिक ठाउँमा ल्याउनका लागि कानुन ऐन नियम आवश्यक पर्छ । नीति र विधि बनाउने अभियानमा म क्रियाशील हुनेछु । नीति र विधि अथवा ऐन नै तयार गरेर ग¥यौँ भने कसैले केही गर्न सक्दैन । मेरो सोंच अब त्यतातिर जाँदैछु ।
तपाईंले सम्हालेका तल्ला निकायसँग कसरी समन्वय गर्नु हुन्छ ? किनभने राखेप, ओलम्पिक कमिटी, राष्ट्रिय युवा परिषदको नेतृत्व त एमालेको छ नि ?
म सफल हुन्छु र असफल हुन्छु भन्ने कुराले देशको खेलकुद जगत सफल हुन्छ कि हुँदैन भन्ने एउटा चुनौती छ । अरुलाई के लाग्छ भने माओवादीको तर्फबाट दलजित श्रीपाली आउनुभएको छ मन्त्री भएर । तर ओलम्पिक्समा पनि एमालेकै नेतृत्व छ, जिवनरामजी हुनुहुन्छ, राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा पनि एमाले नै हुनुहुन्छ । हाम्रो राष्ट्रिय युवा परिषदमा पनि एमाले कै नेता माधव ढङ्गेलजी हुनुहुन्छ । यस्तो अवस्थामा दलजितले कसरी काम गर्न सक्छ त भन्ने प्रश्न आउन सक्छन् । तर मलाई धेरै सजिलो छ । यी सबै साथीहरुसँग हिजो म पिएलए स्पोर्टस क्लवहरु सञ्चालन गरेर आउने बेला राम्रो चिनजान छ । एक अर्कामा राम्रोसँग चिनजान छ । सहयात्रा गरेको हो नि, हिजो हामीले । मैले अहिले पनि उहाँहरुसँग के भन्छु भने मेरो राजनीतिक रुपमा आग्रह पूर्वाग्रह हुँदैन । मैले खेलकुद क्षेत्रमा राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रह राखेर पनि हुँदैन । मैले उहाँहरुसँग क्रिया, अन्तक्रिया गरेर मिलाएर लाने कुरामा एकदम ढुक्क छु । मलाई विश्वास छ के हेर्नुस्, म असफल भए उहाँहरु पनि असफल हुनुहुन्छ । म सफल भए भने उहाँहरु पनि सफल हुनुहुन्छ । हामी दुईटै सफल हुने कहाँ छ भने मिलाएर गयौँ भने सम्भव छ । मिलाएर लाने, जाने कुरामा विश्वस्त छु ।
एक अर्कामा राम्रोसँग चिनजान छ । सहयात्रा गरेको हो नि, हिजो हामीले । मैले अहिले पनि उहाँहरुसँग के भन्छु भने मेरो राजनीतिक रुपमा आग्रह पूर्वाग्रह हुँदैन । म खेलकुद क्षेत्रमा राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रह राखेर पनि हुँदैन ।
सैन्य जीवनमा पनि तपाईं खेलको मोर्चामा हुनुहुन्थ्यो कि युद्धको ?
जहाँसम्म सैन्य जिवनमा खेलेका भूमिकाहरु म वर्ग संघर्षमा पनि सरिक मान्छे हुँ, म जनआन्दोलनमा सहभागी मान्छे हुँ । तपाईंहरुले पत्याउनुहुँदैन । २०४६ सालको जनआन्दोलनमा पनि सहभागी भएर कष्टडी पनि भोगेको मान्छे । त्यसपछि २०४८ साल जनयुद्धको तयारीको क्रममा वर्ग संघर्षमा संलग्न मान्छे पनि र त्यसपछि फागुन १ गते इनिसेसनको पहिलो व्यक्ति पनि म हुँ ।। त्यतिबेला सुरक्षा दलको कमाण्डर भएर गएको थिएँ । त्यसपछि निरन्तर राजनीतिक र सैन्य जिवन विताउदै ठूलो मोर्चामा कमाण्ड गर्दै मलाई दुइटै अनुभव छ । क्षति र उपलब्धीको दुइटै अनुभव पनि छन् । युद्धकलाको राम्रो अनुभव पनि छ । कुशल कमाण्डरको रुपमा पनि मलाई चिन्नुहुन्छ । अहिले सत्य निरुपण पनि छ । मेरो ठुला युद्धमोर्चा छन् । जस्तै रुकुमकोट मोर्चा, सबैभन्दा असफल मोर्चा पनि छन् । जस्तै बर्दियाको गणेशपुर हो । कहिले काँही सम्झन्छु भावनात्मक रुपमा दुःखी छु, त्यतिबेला थुप्रैँ साथीहरुलाई गुमाएँ । म अलि बढी सफलतामा उत्साहित हुने छैन । म असफलतामा पनि निराश हुँदिन । म आत्मप्रशंसा पनि गर्दिन, अरुको प्रशंसा पनि गर्दिन ।
जहाँसम्म सैन्य जिवनमा खेलेका भूमिकाहरु म वर्ग संघर्षमा पनि सरिक मान्छे हुँ, म जनआन्दोलनमा सहभागी मान्छे हुँ । तपाईंहरुले पत्याउनुहुँदैन । २०४६ सालको जनआन्दोलनमा पनि सहभागी भएर कष्टडी पनि भोगेको मान्छे । त्यसपछि २०४८ साल जनयुद्धको तयारीको क्रममा वर्ग संघर्षमा संलग्न मान्छे पनि । त्यसपछि फागुन १ गते इनिसेसनको पहिलो व्यक्ति पनि ।
त्यसकारण युद्ध जिवनमा धेरै मोर्चा छन् मैले लडेका मोर्चाहरु । खेलकुद जिवनमा त्यस्तो तपार्ईंलाई कल्पना गर्ने सकिँदैन होला । भुमिगत जिवनमा नै जनयुद्धकै क्रममा खेलकुदको विकास गरेको हुँ । टिमबद्ध खेलकुदको विकास गरेको र पछि पिएलए स्पोर्टस् क्लवको संस्थापक । जनमुक्ति सेना खेलकुद क्लव निर्माण गरेर त्यसबाट धेरै प्रोडक्सनहरु भए । पाँचौँ राष्ट्रिय खेलकुद जतिबेला सेना बाहिर निस्क्यो । त्यतिबेला प्रचण्ड कमरेड प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । अनि रुक्माङ्गगत प्रधानसेनापनि हुनुहुन्थ्यो । त्यतिबेला म एकदम चिन्तित भए । खेल भनेको कुनै बाँधिने चिज होइन् । सिमा रेखाले बाँधिने चिज होइन । खेल भनेको शान्तिपूर्ण हुनुपर्छ भन्ने लाग्थ्यो तर यहाँ किन यसो गर्छन भन्ने जिज्ञासा थियो । पछिल्लो पटक खेल जिवनमा आइसकेपछि दोश्रो छैटौँ राष्ट्रिय खेलकुद भयो । छैटौं राष्ट्रिय खेलकुदमा हामीले एउटा उचाई हासिल ग¥यो । फिल्ड कमाण्ड मेरै नै थियो । धनगढीमा भएको खेलमा फिल्ड कमाण्डमात्रै होइन कि धेरै खेलाडीहरुको खेलमा विकास भयो । तपाईंलाई थाहा छ साउथ एसियन गेमहरु पनि खेलिसके । त्यसपछि मैले आफ्नै नेतृत्वमा प्रोडक्सन गरेको एक जना अल्ट्राधाविका मिरा राई अहिले विश्व च्याम्पियनका रुपमा अगाडी आउनुभएको छ । उहाँलाई देखेर पनि एउटा विकास भयो भन्ने लाग्दछ । कोही विमला तामाङ्ग जस्तो हुनुहुन्छ । अरु यस्तै यस्तै साथीहरु हुनुहुन्छ । तेक्वान्दोमा राम्रो विकास भएको छ, उसुमा राम्रो विकास भएको छ । मैले एउटा त्यो सफल पक्ष देख्छु । अव यता राजनीतिमा पनि मैले नेतृत्व गरेका सबभन्दा जातीय उत्पिडन, वर्गिय उत्पिडनजस्ता कारण छन् ।
म एउटा शिक्षणको जिन्दगी छोडेर माओवादी आन्दोलनमा सरिक भएँ । सुरुदेखि कहिले राजनीतिक कमाण्ड र कहिले सैन्य जिवन विताउँदैँ म यता आए भने मेरो सफलता यही नै राजनीतिक क्षेत्रबाट भएको हो । मैले के बुझेँ भने कुनै ठाउँमा पनि निरन्तर लागि राख्ने हो भने सफलता मिल्दो रहेछ । जस्तोसुकै कठिनाईमा पनि निरन्तर विचलीत नभई लागिराख्ने हो भने यो सफलता एक दिन मिल्दो रहेछ भन्ने मलाई विश्वास छ ।अब खेलकुद क्षेत्रमा आइसकेपछि जिम्मेवारी सम्हालेको छु ।
मैले के बुझेँ भने कुनै ठाउँमा पनि निरन्तर लागि राख्ने हो भने सफलता मिल्दो रहेछ । अपनाउन नहुने हो भने । जस्तोसुकै कठिनाईमा पनि निरन्तर विचल्लीत नभई लागिराख्ने हो भने यो सफलता एक दिन मिल्दो रहेछ भन्ने मलाई विश्वास छ । अब खेलकुद क्षेत्रमा आइसकेपछि जिम्मेवारी सम्हालेको छु ।
मन्त्रालयको काम कसरी सुरु गर्नुभयो ?
भर्खर जिम्मेवारी सम्हालेको छु । हिजो मात्र त्यहाँ आएर एउटा चरणको सुरुवात गरेको छु । पहिलाको पुरानो व्रिफिङ्ग भन्दा पनि नयाँ उचाइमा जाने गरेर यस्को जति पनि सेक्टरहरु छन् जस्तो राष्ट्रिय खेलकुद परिषद, युवा परिषद र अर्को स्काउट । त्यहाँ व्रिफिङ्ग मन्त्रालयमा मात्र नसुन्ने मैले राष्ट्रिय खेलकुद भित्रै गएर अन्तक्रिया, विफ्रिङ्ग गर्ने र सुन्नेछु । सबै जो जो यस मन्त्रालयका मातहतका निकाय छन् तिनका कुरा मन्त्रालयमा सुनेर पत्याउने पक्षमा म छैन ।
म यो अनुभव लिन चाहन्छु । पूर्वप्रधानमन्त्री ज्युहरुको, पूर्व सदस्य सचिवज्युहरु, विभिन्न पार्टीमा खेलकुद विभाग हेर्ने प्रमुखहरुसँग र पत्रकारहरुसँगको अन्तक्रियाको समय मिलाउँदै छु ।
तपाईं दलित समूदायबाट नीति निर्माणको उपल्लो तहमा पुग्नुभएको छ । आफ्नो समूदायका लागि तपाईंको योजनाहरु के के छन् त ?
दलित समुदायबाट अहिले धेरै ठूलो आशा छ, उत्साह छ । यो उत्साहलाई मैले कसरी विश्वासमा बदल्ने भन्ने चुनौति मेरो सामु छ । उत्साह, आशा ,अपेक्षा तमाम रुपमा छन् । संविधानमा लेखिएका कतिपय कुराको कानुन बनाउने हुन्छ । कतिपय क्याविनेटमा लगेर सिधै कार्यान्वयन गर्ने अवस्था हुन्छ । मेरो पहल के हुन्छ भने प्रधानमन्त्री, कानुन मन्त्री, गृहमन्त्री र विषयगत मन्त्रीसँग बढीभन्दा बढी छलफल गरेर सहकार्य गरेर त्यो एजेण्डाहरु त्यहाँबाट कसरी क्याविनेटबाट पास गरेर जान सकिन्छ भन्ने कुरामा नै छलफल हुन्छ । दोश्रो कुरा कानुन नै बनाएर जाने कुरामा कानुनमन्त्री र प्रधानमन्त्रीसँग मेरो बढीभन्दा बढी पहल हुन्छ ।
तेस्रो कुरा, त्यसो भएन भने बाहिरको बल प्रयोग गरेर भित्र लड्ने कुरामा मेरो कुनै कमी रहदैन । बाहिर शक्ति बलियो भयो भने त म भित्र एक्लै हुँदा पनि मेरो राजनीतिक जीवनको नमुना नै हुन्छ । एउटा त अहिले सामान्यजस्तो लाग्छ, तर नमुना छ ।
– See more at: http://dalitonline.com/archives/13984#sthash.OmOB85Ru.dpuf
By जागरण मिडिया सेन्टर in अन्तरवार्ता, अन्य, दलित समाचार on August 8, 2016 .
← अजितका हत्यारालाई कारबाहीको माग गर्दै काठमाण्डौंमा बिरोध ¥याली, न्यायका लागि आन्दोलन शसक्त बनाइने	समाज जोड्ने जोडी →